စျေးကွက်အတိုကောက်၊ အရောင်းအတိုကောက်၊ နည်းပညာအတိုကောက်နှင့်အတိုကောက်ဝေါဟာရများ | Martech Zone
ငါသည်အခြားအတိုကောက်ကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ယူခြင်းသည်အပတ်တိုင်းပုံရသည်။ ငါဒီမှာသူတို့ထဲကတက်ကြွစွာစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်သွား! အဘို့အအက္ခရာကနေတဆင့်ခုန်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည် အရောင်းအတိုကောက်, စျေးကွက်အတိုကောက်ဒါမှမဟုတ် အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအတိုကောက် သင်ရှာနေသည် -
ကိန်းဂဏန်းများ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
၀၁FA - two-factor authentication- သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်တို့ထက်ကျော်။ အွန်လိုင်းအကောင့်များ၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုသောအကာအကွယ်အပိုတစ်ခု။ အသုံးပြုသူသည်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသောအခါဒုတိယစာမေးပွဲအဆင့်ကိုရိုက်ရန်လိုအပ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောကုဒ်ကိုတုန့်ပြန်သည်။
4P - ကုန်ပစ္စည်း, စျေး, နေရာ, အရောင်းမြှင့်တင်ရေး: 4P စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံသည်သင်ရောင်းနေသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ သင်မည်မျှကောက်ခံပြီးတန်ဖိုး၊ တန်ဖိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်၎င်းကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရန်တို့ပါဝင်သည်။
ABC ရုပ်သံ - အမြဲတမ်းပိတ်ပါဖြေ - ဒါကသင်ငယ်ရွယ်တဲ့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ယူသင့်တဲ့အရောင်းအတိုကောက်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်သောအရောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် ABC သို့လိုအပ်သည်။
ABM - အကောင့် -based စျေးကွက်ရှာဖွေရေးABM သည်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးကိုညှိနှိုင်းပြီးကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအလားအလာများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏အကောင့်များသို့ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ACoS - ရောင်းရန်ကြော်ငြာ၏ကုန်ကျစရိတ်- အမေဇုံပံ့ပိုးသောထုတ်ကုန်များလှုပ်ရှားမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့်မက်ထရစ်။ ACoS မှကြော်ငြာသုံးစွဲမှုအချိုးနှင့်ရည်မှန်းထားသောရောင်းအားအချိုးကိုညွှန်ပြပြီးဤပုံသေနည်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ ACoS = ကြော်ငြာသုံးစွဲမှု÷ရောင်းအား.
ACV - ပျမ်းမျှဖောက်သည်တန်ဖိုးဖြေ - လက်ရှိဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ရောင်းခြင်းဟာအသစ်တစ်ခုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရခြင်းထက်အမြဲတမ်းဈေးနည်းပါတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီများသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး လျှင် ၀ င်ငွေမည်မျှရှိသည်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး၎င်းကိုတိုးမြှင့်ရန်ကြည့်ရှုကြသည်။ ACV တိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းပေါ် မူတည်၍ ငွေစာရင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်မကြာခဏလျော်ကြေးရသည်။
AE - အကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်အရောင်းအဖွဲ့ ၀ င်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအရောင်းအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ထိုအကောင့်၏အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောစာရင်းအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။
အိုင်အယ်လ်အို ဉာဏ်ရည်တု: များသောအားဖြင့်လူ့ဥာဏ်ရည်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စမတ်စက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျယ်ပြန့်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနခွဲ။ တိုးတက်မှုများ စက်သင်ယူမှု နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်းသည်နည်းပညာနယ်ပယ်အားလုံးနီးပါးတွင်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
AIDA - အာရုံစူးစိုက်မှု, အကျိုးစီးပွား, Desire, လှုပ်ရှားမှုလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ထုတ်ကုန်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ AIDI သည်အအေးမိခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။
နံနက် - စာရင်းကိုင်မန်နေဂျာ: AM ဆိုသည်မှာအရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်ကြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အကောင့်ကြီးများကိုကြီးကြပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
API - လျှောက်လွှာ Programming Interface ကိုဖြေ - မတူညီတဲ့စနစ်တွေအချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စကားပြောဖို့နည်းလမ်း။ သူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်အောင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပုံစံချထားသည်။ browser တစ်ခုသည် HTTP တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး HTML ကိုပြန်ပို့သကဲ့သို့ APIs များသည် HTTP တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြင့်တောင်းဆိုပြီး XML သို့မဟုတ် JSON သို့ပြန်သွားသည်။
AR - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality: အသုံးပြုသူအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏အသုံးပြုသူအမြင်အပေါ်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ virtual အတွေ့အကြုံကို superimposes, ဒါကြောင့်ပေါင်းစပ်အမြင်ပေးနည်းပညာတစ်ခု။
ARPA - အကောင့်တစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှ MRR (လစဉ်ဝင်ငွေ) - ဤစာရင်းသည်အကောင့်အားလုံးတွင်လစဉ်ဝင်ငွေ၏ပျမ်းမျှပမာဏကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်
ARR - နှစ်စဉ်ထပ်တလဲလဲအခွန်နှစ်ပတ်လည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုတွင်အသုံးပြုသည်။ ARR = 12 X ကို MRR
ASA - ဖြေဆိုရန်ပျမ်းမျှမြန်နှုန်းဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်နှင့်စကားမပြောနိုင်မီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်မည်မျှစောင့်ခဲ့သည်ကိုတိုင်းတာသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ASO - App Store ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါသင်၏မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့် App Store မှရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွင်း၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကူညီရန်အတွက်အသုံးချသည့်နည်းဗျူဟာ၊ ကိရိယာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ASR - ကutomatic မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှု: သဘာဝအမိန့်ကိုနားလည်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်စနစ်များ၏စွမ်းရည်။ ASR စနစ်များကိုအသံလက်ထောက်များ၊ chatbots များ၊ စက်ဘာသာပြန်ခြင်းများနှင့်အခြားအရာများတွင်အသုံးပြုသည်။
AT - Assisted Technologies က- မသန်စွမ်းသူတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသောမည်သည့်နည်းပညာကိုမဆို။
ATT - Transparency App ကို Tracking- Apple iOS ထုတ်ကုန်များမှာအသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အချက်အလက်များကိုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကအသုံးပြုသူမှမည်သို့ခြေရာခံသည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
AutoML - အလိုအလျောက်စက်သင်ယူမှု: ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များဖြန့်ကျက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ ၀ ယ်သူအားလုံးနှင့်အသုံးပြုမှုကိစ္စများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် Salesforce အတွင်းရှိစက်သင်ကြားမှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
AWS - အမေဇုံက Web Services က: အမေဇုံ၏ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်နည်းပညာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေါင်း ၁၇၅ ခုကျော်ရှိသည်။
B2B - စီးပွားရေးမှစီးပွားရေး: B2B သည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ရောင်းချခြင်း (သို့) ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖော်ပြသည်။ များစွာသောလက်လီစတိုးဆိုင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဆင်ပြေစေပြီး B2B အရောင်းအ ၀ ယ်အများစုသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုစားသုံးသူများထံမရောက်မီနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပျက်နေသည်။
B2C - စားသုံးသူစီးပွားရေး: B2C သည်သမားရိုးကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံဖြစ်ပြီးစားသုံးသူကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်။ B2C စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လေလံပွဲများနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းများသည်လက်လီရောင်းချရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။
B2B2C - စီးပွားရေးမှစားသုံးသူသို့စီးပွားရေးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် B2B နှင့် B2C တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသော e-commerce မော်ဒယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဖြေရှင်းချက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုတီထွင်ပြီး၎င်းကိုအခြားစီးပွားရေး၏အသုံးပြုသူများအားပေးသည်။
BI - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထောက်လှမ်းရေး: လေ့လာသုံးသပ်သူများအတွက်ဒေတာများကိုရယူရန်၊ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ထို့နောက်၎င်းကိုပြရန်အတွက် toolset သို့မဟုတ် platform တစ်ခု။ အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်ဒိုင်ခွက်ရလဒ်များသည်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန် KPIs နှင့်အခြားဒေတာများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးစေသည်။
BIMI - Message Identification အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ညွှန်ကိန်းများအီးမေးလ်သတ်မှတ်ချက်များသည်အီးမေးလ်ဖောက်သည်များအားအထောက်အပံ့ပြုရာတွင်အမှတ်တံဆိပ်ထိန်းချုပ်ထားသောလိုဂိုများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသောအီးမေးလ်သတ်မှတ်ချက် BIMI သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ DMARC အကာအကွယ်ကိုဖြန့်ကျက်။ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်များကို ၀ ယ်သူ၏ inbox သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏လိုဂိုကိုပြသရန်အီးမေးလ်သည်အဖွဲ့အစည်း၏ဒိုမိန်းကိုအယောင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိစေရန် DMARC အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုကျော်ဖြတ်ရမည်။
BOGO - One ကိုဝယ်ယူပါ: “ တစ်ခုကိုဝယ်ပါ၊ အခမဲ့ရယူပါ” (သို့)“ တစ်လုံး၏စျေးနှုန်းအတွက်နှစ်လုံး” သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၏ဘုံပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
BOPIS - အွန်လိုင်း Pick-Up In-Store ကိုဝယ်ပါ။ စားသုံးသူများအတွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ဒေသခံလက်လီဆိုင်များတွင်ချက်ချင်းကောက်ယူနိုင်သောနည်းစနစ်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်၎င်းသည်သိသိသာသာကြီးထွားမှုနှင့်မွေးစားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ အချို့လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှသင်၏ကားကိုကုန်ပစ္စည်းများတိုက်ရိုက်တင်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
BR - ဘောင်းနှုန်းဖြေ - bounce rate ဆိုတာ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှာအသုံးပြုသူရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းတယ်။ အကယ်၍ သူတို့သည်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်ဆင်းပြီးအခြား site တစ်ခုသို့သွားပါကသူတို့သည်သင်၏စာမျက်နှာမှထွက်သွားသည်။ ၎င်းသည် inbox ထဲသို့မရောက်ရှိသောအီးမေးလ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို KPI တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်မြင့်မားသောခုန်နှုန်းသည်အခြားပြissuesနာများအကြားထိရောက်မှုမရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာကိုပြသနိုင်သည်။
BANT - ဘတ်ဂျက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်အချိန်ဇယားလိုအပ်သည်: ၎င်းသည်အလားအလာရှိရောင်းရန်အချိန်ကောင်းလားဆိုသည်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည့်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်။
BDR - စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်: စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအသစ်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တာ ၀ န်ယူထားသောအဆင့်မြင့်အထူးရောင်းဝယ်မှုအခန်းကဏ္။ ။
CAC - ဖောက်သည်ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ် - ROI တိုင်းတာရန်အရောင်းအတိုကောက်တစ်ခု။ ၀ ယ်ယူသူနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်အားလုံး။ CAC တွက်ချက်မှုအတွက်ပုံသေနည်းမှာထိုအချိန်ကာလအတွင်းသုံးစွဲသူအသစ်များ၏ (လစာ + ကော်မရှင် + အပိုဆု + overhead) / # ဖြစ်သည်။
CAN-SPAM - မတောင့်တသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စော်ကားမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြေ - ၂၀၀၃ မှာပြဌာန်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဥပဒေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအီးမေးလ်ပို့ရန်တားမြစ်သည်။ အီးမေးလ်အားလုံးတွင်စာရင်းမဖျက်ရန်ရွေးစရာတစ်ခုကိုသင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရဘဲနှင့်အမည်များကိုထပ်ထည့်သင့်သည်။
CASS - တိကျမှန်ကန်မှုကိုပံ့ပိုးမှုစနစ်ကုဒ်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု (USPS) သည်လမ်းလိပ်စာများကိုကိုက်ညီသောကိုက်ညီသည့် software များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီသည်။
CCPA - ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူသီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ဥပဒေ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးနှင့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့်ပြည်နယ်ဥပဒေတစ်ရပ်
CCR - ဖောက်သည်အလွန်အမင်းနှုန်းဖောက်သည်များ၏ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည့်မက်ထရစ်။ CCR ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပုံသေနည်းမှာ CR = (အချိန်ကာလအစတွင်ဖောက်သည်အရေအတွက် - တိုင်းတာသည့်ကာလအဆုံးတွင်သုံးစွဲသူများ #) / (တိုင်းတာသည့်အစတွင်ဖောက်သည်အရေအတွက်)
CDP - သုံးစွဲသူအချက်အလက်ပလက်ဖောင်းအခြားစနစ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သောဗဟို၊ မြဲ၊ ပေါင်းစည်းထားသောဖောက်သည်ဒေတာဘေ့စ်။ အချက်အလက်များကိုအရင်းအမြစ်မျိုးစုံမှရယူပြီးသန့်ရှင်းပြီးသုံးစွဲသူကိုယ်ရေးကိုယ်တာတစ်ခု (360 ဒီဂရီမြင်ကွင်းဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်တုန့်ပြန်ရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှအသုံးပြုနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူပေါ် မူတည်၍ ဖောက်သည်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
CLM - စာချုပ် Lifecycle စီမံခန့်ခွဲမှု: စာချုပ်ကိုစတင်ခြင်းမှချီးမြှင့်ခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းအထိတက်ကြွ။ နည်းစနစ်ကျသောစီမံခန့်ခွဲမှု။ CLM ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာတိုးတက်ခြင်းများဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
CLTV သို့မဟုတ် CLV - ဖောက်သည်တစ်သက်တာတန်ဖိုးဖြေ - အမြတ်အစွန်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဟာဖောက်သည်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝသက်တမ်းတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။
CLS - တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ Layout Shift: Google ၏အသုံးပြုသူနှင့်စာမျက်နှာအတွေ့အကြုံသည်တိုင်းတာမှု၌၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုတွေ့ရသည် အဓိက Web Vitals.
CMO - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်: အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုအတွက်အသိပညာပေးခြင်း၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဝယ်လိုအား (MQLs) မောင်းနှင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသောအလုပ်အမှုဆောင်။
CMP - အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး- ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ လူမှုမီဒီယာများ၊ အကြောင်းအရာများသိုလှောင်ရာနေရာများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြော်ငြာများအတွက်အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်စီစဉ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုကူညီရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
CMRR - လစဉ်ထပ်တလဲလဲအခွန်ကတိကဝတ်: စာရင်းကိုင်ဘက်မှနောက်ထပ်အရောင်းအတိုကောက်။ ၎င်းသည်လာမည့်ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်တွင် MMR တွက်ချက်ရန်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်။ CMRR တွက်ချက်ရန်ပုံသေနည်းမှာ (လက်ရှိ MMR + အနာဂတ်တွင်ပြုလုပ်မည့် MMR၊ ဘဏ္customersာရေးနှစ်အတွင်းသက်တမ်းတိုးရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ဖောက်သည်များ၏ MMR ကိုအနုတ်) ။
CMS - Content Management System- အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသည် CMS ၏ဥပမာ များမှာ HubSpot နှင့် WordPress ကို။
CMYK - Cyan, Magenta, အဝါရောင်နှင့် Key: နုတ်ထုတ်အရောင်မော်ဒယ်, CMY အရောင်မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံပြီး, အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ CMYK သည်အချို့သောအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည့် cyan၊ magenta, yellow, နှင့် key တို့ကိုအသုံးပြုသည်။
CNN - ဂonvolutional အာရုံကြောကွန်ယက်: မကြာခဏကွန်ပျူတာရူပါရုံကိုတာဝန်များကိုအတွက်အသုံးပြုနက်ရှိုင်းသောအာရုံကြောကွန်ယက်အမျိုးအစား။
COB - စီးပွားရေးပိတ်ဖြေ - ငါတို့မေမေခွဲတမ်းကို COB နဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်။ မကြာခဏ EOD (နေ့၏အဆုံး) နဲ့အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ COB / EOD ဆိုသည်မှာညနေ ၅း၀၀ နာရီဖြစ်သည်။
CPC - ကလစ်နှိပ်ပါ Per ကုန်ကျစရိတ်ဖြေ - ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာကြော်ငြာနေရာကိုကြေငြာသူတွေကသုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု။ ကြော်ငြာရှင်များသည်ထိတွေ့မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲနှိပ်လိုက်သောအခါကြော်ငြာအတွက်သာပေးသည်။ ၎င်းသည်ရာနှင့်ချီသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမလုပ်ဆောင်ပါကအခကြေးငွေမရှိပါ။
CPG - စားသုံးသူထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ ဥပမာ - ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာများ၊ အဖျော်ယမကာများ၊ အိမ်သာသုံးပစ္စည်းများ၊ သကြားလုံးများ၊ အလှကုန်များ၊ ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊
CPI - ဖောက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းအရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်မှု၊ သုံးစွဲရန်လွယ်ကူခြင်း၊ အကြံပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏တန်ဖိုးစသည့် ၀ ယ်ယူသူများ၏သဘောထားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဤရွေ့ကားမက်ထရစ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖောက်သည် retention ကို, ဝယ်ယူတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ဖောက်သည်နှုန်းတိုးမြှင့်တန်ဖိုးကိုမှဖြစ်ကြသည်။
CPL - ခဲနှုန်းကုန်ကျစရိတ်ဖြေ - CPL က ဦး ဆောင်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုစဉ်းစားတယ်။ ကြော်ငြာသုံးစွဲသောဒေါ်လာ၊ အပေါင်ပစ္စည်းဖန်တီးခြင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်လက်ခံခြင်းအတွက်အခကြေးငွေနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်။
CPM - တစ်ထောင်နှုန်းကုန်ကျဖြေ - CPM ဆိုတာကြေငြာသူတွေကကြော်ငြာအတွက်အခကြေးငွေပေးတာ။ ဤနည်းသည်စွဲမှတ်မှုနှုန်း ၁၀၀၀ နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်သည် (M သည် ၁၀၀၀ အတွက်ရောမဂဏန်းဖြစ်သည်) ။ ကြော်ငြာကိုဘယ်ပုံဘယ်ပုံဘယ်ပုံဘယ်နှစ်ခါနှိပ်မိလဲဆိုတာမကြည့်ဘူး။
CPQ - စျေးနှုန်းညှိပါ: ပြုပြင်ရန်, စျေးနှုန်းကိုးကား software ကိုရောင်းသူများရှုပ်ထွေးပြီး configurable ထုတ်ကုန်ကိုးကားကူညီပေးသော software ကိုစနစ်များကိုဖော်ပြရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း -to- စီးပွားရေး (B2B) စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
CRM - ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုCRM ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ဘ ၀ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။ CRM ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်သင့်အား ဦး ဆောင်သူများကိုပြောင်းလဲရန်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်ကူညီနိုင်သည်။
CR - ပြောင်းလဲမှုနှုန်းဖြေ - လုပ်ဆောင်နိုင်သူအရေအတွက်၊ ရှိနိုင်တဲ့နံပါတ်နဲ့စားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်၏အီးမေးလ်လှုံ့ဆော်မှုသည်အလားအလာ ၁၀၀ နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားမှု ၂၅ ခုသို့ရောက်ရှိပါကသင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည် ၂၅% ဖြစ်သည်
CRO - ဘယ်သူလဲf အခွန် ဦး စီးဌာနမှူးဖြေ - ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရောင်းဝယ်မှုနဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့အမှုဆောင်တစ် ဦး ။
CRO - ကူးပြောင်းခြင်းနှုန်း Optimization၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအရေအတွက်ပြောင်းလဲလာစေရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ စာမျက်နှာများ၊ လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့် CTAs များအပါအ ၀ င်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုသေချာစွာလေ့လာရန်ဤအတိုကောက်သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
CRR - သုံးစွဲသူ၏ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းဖြေ။ ။ အချိန်ကာလရဲ့အစမှာသင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်း (ဖောက်သည်အသစ်တွေကိုမရေတွက်ပါဘူး) ။
CSV - ကော်မာ -separated တန်ဖိုးများ: ၎င်းသည်စနစ်အတွင်းဒေတာများကိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်းအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသောဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း CSV ဖိုင်များသည်ဒေတာအတွင်းတန်ဖိုးများကိုခွဲခြားရန်ကော်မာသုံးသည်။
CTA - လှုပ်ရှားမှုမှ Callအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူများအားအသိပေးရန်၊ ပညာပေးရန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို၏ရည်မှန်းချက်မှာစာဖတ်သူများကိုသူတို့ဖတ်ထားသောအကြောင်းအရာအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ CTA သည်စာဖတ်သူကိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ ခေါ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်တွန်းအားပေးသည့် link, button, image သို့မဟုတ် web link တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
CTOR - ပွင့်လင်းနှုန်းကိုနှိပ်ပါ: Click-to-open နှုန်းသည်ပေးပို့ထားသောအီးမေးလ်အရေအတွက်ထက်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အီးမေးလ်အရေအတွက်မှကလစ်နှိပ်ခြင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤမက်ထရစ်သည်ဒီဇိုင်းနှင့်စာတိုပေးပို့မှုသည်သင်၏ပရိသတ်နှင့်မည်သို့တုံ့ပြန်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောတုံ့ပြန်ချက်ကိုပေးသည်။ ဤကလစ်များသည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခဲ့သူများမှသာဖြစ်သည်။
CTR - Through Rate ကိုနှိပ်ပါ: CTR သည် CTA နှင့်ဆက်နွယ်သော KPI ဖြစ်သည်။ အက္ခရာအနည်းငယ်သာရှိသောဟင်းချိုအတွက်မည်သို့ဖြစ်သည်။ ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်ကူးယူမှုနှုန်းသည်နောက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်သောစာဖတ်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ landing page တစ်ခုတွင် CTR သည်အရေးယူဆောင်ရွက်သူနှင့်နောက်ခြေလှမ်းသို့လှမ်းသွားသောအရေအတွက်အားဖြင့်ခွဲခြားထားသောစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။
CTV - ချိတ်ဆက်ထားပြီးတီဗီ- Ethernet ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့်အခြားကိရိယာများသို့ချိတ်ဆက်ထားသော display များအနေဖြင့်အသုံးပြုသောတီဗီများ။
CWV - အဓိက Web Vitalsသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ၏အဓိကရှုထောင့်များကိုတွက်ချက်ပေးသောလက်တွေ့ကျသော၊ အသုံးပြုသူဗဟိုပြုဂူးဂဲလ်၏ Google အစုံ။ ဆက်ဖတ်ရန်.
CX - ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ: သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့်အဆက်အသွယ်အားလုံး၏အတိုင်းအတာ။ ၎င်းတွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်ဆံခြင်း၊ သင်၏အရောင်းအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
DAM - ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု- ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအဝင်ကြွယ်ဝသောမီဒီယာဖိုင်များအတွက်ပလက်ဖောင်းနှင့်သိုလှောင်မှုစနစ်။ ၎င်းပလက်ဖောင်းများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများအားသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီး၊ သိုလှောင်၊ စုစည်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ in ဗဟိုတည်နေရာ။
DBOR - မှတ်တမ်း၏ဒေတာဘေ့စနောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်တွေရှိတဲ့စနစ်တွေကိုဖြတ်ပြီးသင့်အဆက်အသွယ်ရဲ့အချက်အလက်ရင်းမြစ်။ မကြာခဏအဖြစ်လူသိများ အမှန်တရား၏ရင်းမြစ်.
DCO - dynamic အကြောင်းအရာ Optimization: ကြော်ငြာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုသူနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများကိုဖန်တီးသည့်ကြော်ငြာနည်းပညာကိုပြသပါ။ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်နှုန်းထားများတိုးတက်လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
DL - နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်း: အလွှာပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုသောစက်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများကိုရည်ညွှန်းသည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အလွှာများတိုးချဲ့ရန်အတွက်ကွန်ပျူတာစွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်ပြီးမော်ဒယ်အတွက်လေ့ကျင့်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။
DMP - ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း: ပရိသတ်များနှင့်ပတ်သက်သောပထမ ဦး ဆုံးအချက်အလက်များကိုစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင်၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ CRM စသည်နှင့် / သို့မဟုတ်တတိယပါတီ (အမူအကျင့်၊ လူ ဦး ရေ၊ ပထဝီ) အချက်အလက်များပေါင်းစပ်ထားသောသင်သူတို့ကို၎င်းတို့အားပိုမိုထိရောက်စွာပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။
DPI - လက်မနှုန်းအစက်: Resolution သည်တစ်လက်မလျှင်တစ်လက်မလျှင်မည်မျှ pixel မည်မျှရှိသည်ကိုတိုင်းတာသည်။
DRR - ဒေါ်လာ retention ကိုနှုန်းဖြေ - အချိန်ကာလရဲ့အစမှာသင်ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သင်သိမ်းထားတဲ့ ၀ င်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်း (ဝင်ငွေအသစ်ကိုမရေတွက်ပါဘူး) ။ ၎င်းကိုတွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းမှာသင်၏ဖောက်သည်များကိုဝင်ငွေအတိုင်းအတာဖြင့်အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားရန်ဖြစ်ပြီးအကွာအဝေးတစ်ခုစီအတွက် CRR ကိုတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။
DSP - ဝယ်လိုအားဘေးထွက်ပလက်ဖောင်း: ကြော်ငြာခြင်း ၀ ယ်ယူမှုမျိုးစုံကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီထင်မြင်ချက်များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း၊
DXP - ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံပလက်ဖောင်း: ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုအတွက်လုပ်ငန်းဆော့ဖ်ဝဲသည်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အာရုံစိုက်သည်။ ဤရွေ့ကားပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းထုတ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်မကြာခဏဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုထည့်သွင်းထုတ်ကုန်များအစုံဖြစ်ကြသည်။ ဗဟိုမှဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့်သူတို့သည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးသည်။
ELP - နားထောင်ခြင်းပလက်ဖောင်းဖြေ။ ။ သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ပြိုင်ဘက်များသို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ဖော်ပြချက်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင်တိုင်းတာ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုကူညီပေးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
ERP - လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း: ကြီးမားသောစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအနှံ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဘက်ပေါင်းစုံစီမံခန့်ခွဲမှု။
ESM - အီးမေးလ်လက်မှတ်အရောင်းအ ၀ ယ်: အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းတသမတ်တည်းတံဆိပ်တပ်ထားသောအီးမေးလ်လက်မှတ်များပါ ၀ င်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှပေးပို့သောအီးမေးလ်များမှတဆင့် ၁: ၁ အီးမေးလ်များမှတဆင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ESP - အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုပေးပို့ရန်၊ စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အီးမေးလ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်ကူညီသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
EOD - နေ့၏အဆုံး။ ။ လိုပဲ။ “ EOD ရဲ့ May May ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်။ ” မကြာခဏ COB (Close of Business) နှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ COB / EOD ဆိုသည်မှာညနေ ၅ နာရီဖြစ်သည်
FAB - ထူးခြားချက်များ၊ ကောင်းကျိုးများဖြေ - နောက်ထပ်အရောင်းအ ၀ ယ်အတိုကောက်နောက်တစ်ခုကတော့အရောင်းအဖွဲ့ ၀ င်များကိုဖောက်သည်တွေကသူတို့ရောင်းတဲ့အရာတွေထက်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကနေရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့သတိပေးတယ်။
FIP - ပထမထည့်သွင်းမှုနောက်ကျခြင်း: Google ၏အသုံးပြုသူနှင့်စာမျက်နှာအတွေ့အကြုံလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာသည် အဓိက Web Vitals.
FKP - Fအရေးကြီးအချက်များ: လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ထူးခြားသောမျက်နှာအမှတ်အသားတစ်ခုဖန်တီးရန်နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးများနှင့်ပါးစပ်များပတ်ပတ်လည်တွင်နေရာချလေ့ရှိသည်။
FUD - ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မသေချာမရေရာခြင်း၊။ ဖောက်သည်များထွက်ခွာရန် (သို့) သံသယဖြစ်စေသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခြင်းဖြင့်ပြိုင်ဘက်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မရွေးချယ်သောအရောင်းနည်းလမ်း။
GA - Google Analyticsဖြေ။ ။ ဒီဟာကစျေးကွက်သမားတွေကိုသူတို့ရဲ့ပရိသတ်၊ လက်လှမ်းမီမှု၊ လှုပ်ရှားမှုနဲ့မက်ထရစ်တွေကိုပိုနားလည်အောင်ကူညီပေးတဲ့ဂူဂဲလ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
GAID - Google ကြော်ငြာ IDAndroid ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်ကြော်ငြာရှင်များကိုပေးသောထူးခြားသောကျပန်းအမှတ်အသား။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ Device များ၏ GAID များကို reset လုပ်နိူင်ပြီး ၄ င်းတို့ရဲ့ devices တွေကို tracking မှဖယ်ထုတ်ဖို့ disable လုပ်နိူင်တယ်။
GAN - မျိုးရိုးဗီဇဆန့်ကျင်ဖက်ကွန်ယက်: အသစ်နှင့်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်ကို။
GDD - ကြီးထွားမှု - မောင်းနှင်ဒီဇိုင်း- ဒီဟာက ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာဖြင့်မောင်းနှင်သည့်ညှိနှိုင်းမှုများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်တိုးမြှင့်သည်။
GDPR - အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ: ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ဥရောပစီးပွားရေးinရိယာတွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအီးယူနှင့်အီးယူဒေသများအပြင်ဘက်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
GUI - ဂရပ်ဖစ်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် ကွန်ပျူတာ software အတွက်အပြန်အလှန်အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းများ
GXM - လက်ဆောင်အတွေ့အကြုံစီမံခန့်ခွဲမှု: လက်ဆောင်များနှင့်လက်ဆောင်ကဒ်ပြားများကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းစနစ်များနှင့်အလားအလာရှိသူများထံအသိပေးခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊
H2H - လူ့ - မှလူ့: ၁: ၁ ကိုယ်ပိုင်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်လက်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြင့်စေ့စပ်မှုကိုအားပေးသည်။
HTML - Hypertext Markup ဘာသာစကား: HTML ဆိုသည်မှာဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးရန်ပရိုဂရမ်မာများသုံးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အသုံးပြုသောအကြောင်းအရာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာသား၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အရာဝတ္ထုများကိုဖော်ပြထားသည်။ ယနေ့ခေတ် web တည်ဆောက်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည် HTML ကိုနောက်ခံဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
HTTP - Hypertext လွှဲပြောင်း protocol ကို- ဖြန့်ဝေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
HTTPS - Hypertext လွှဲပြောင်း protocol ကို: Hypertext လွှဲပြောင်း protocol ၏ extension တစ်ခု။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်ခုမှလုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ HTTPS တွင်ဆက်သွယ်ရေး protocol သည် Transport Layer Security သို့မဟုတ်ယခင်က Secure Sockets Layer သုံး၍ စာဝှက်ထားသည်။
အိုင်အေအေ - In-App ကြော်ငြာဖြေ - မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာကြော်ငြာကွန်ယက်တွေသုံးပြီးတတိယပါတီကြော်ငြာသူများ၏ကြော်ငြာများ။
IAP - In-App ဝယ်ယူမှုဖြေ - အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဝယ်ယူထားသောအရာတစ်ခုခု၊ ပုံမှန်အားဖြင့်စမတ်ဖုန်း (သို့) အခြားမိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်များတွင်အလုပ်လုပ်သောလက်ကိုင်ဖုန်း application ။
အိုင်စီအေ - ပေါင်းစည်းအကြောင်းအရာ Analytics မှ: အတုဥာဏ်ရည် (AI) နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။
ICP - အကောင်းဆုံးစံနမူနာ: အမှန်တကယ်ဒေတာနှင့်ရည်ညွှန်းအသိပညာကိုအသုံးပြု။ ဖန်တီးသောဝယ်သူပုဂ္ဂိုလ်။ သင်၏အရောင်းအဖွဲ့လိုက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလားအလာကိုဖော်ပြသည်။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ၊ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပါဝင်သည်။
IDE - ပေါင်းစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်: သည်အသုံး ၀ င်သော developer tools များကို single user graphical user interface (GUI) သို့ပေါင်းစပ်သော applications များတည်ဆောက်ရန် software တစ်ခုဖြစ်သည်။
IDFA - ကြော်ငြာရှင်များအတွက်အမှတ်အသား: ဆိုသည်မှာ Apple မှအသုံးပြုသူ၏စက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောကျပန်းပစ္စည်းအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာရှင်များကအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်ဒီဟာကိုသုံးပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာများပို့နိုင်သည်။ iOS 14 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ opt-in တောင်းဆိုမှုမှတစ်ဆင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
ILV - အတွင်းခဲခဲအလျင်: ဦး ဆောင်နှုန်းမှာတိုင်းတာခြင်းတိုးမြှင့်နေကြသည်။
iPaaS - ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပေါင်းစည်းမှုပလက်ဖောင်း: Cloud application နှင့် On-premis applications များအပါအ ၀ င်မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အသုံးပြုသော software application များကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသော automation tools များ။
IPTV - အင်တာနက်ပရိုတိုကောရုပ်မြင်သံကြား: ရိုးရာဂြိုလ်တုနှင့်ကေဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားပုံစံများမှတဆင့်အစားအင်တာနက်ပရိုတိုကောကွန်ယက်များမှရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာလွှင့်ထုတ်ခြင်း။
ISP - Internet Service Provider: စားသုံးသူ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပံ့ပိုးသူ။
IVR - အပြန်အလှန်အသံတုံ့ပြန်မှု: အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်အသံတုံ့ပြန်မှုသည်လူသားများအားကွန်ပျူတာဖြင့်လည်ပတ်သောဖုန်းစနစ်နှင့်လူတို့အားဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ နည်းပညာအဟောင်းများသည်ဖုန်းကီးဘုတ်အသံများကိုအသုံးပြုသည်။ စနစ်အသစ်များသည်အသံတုန့်ပြန်မှုနှင့်သဘာဝြဖစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။
KPI - အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုမည်မျှထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြသသည့်တိုင်းတာနိုင်သောတန်ဖိုး။ အဆင့်မြင့် KPIs များသည်စီးပွားရေး၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ အဆင့်နိမ့်သော KPIs များသည်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊
L2RM - အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ဦး ဆောင်လမ်းပြဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ပုံစံ။ ၎င်းတွင်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မက်ထရစ်များပါ ၀ င်ပြီးဖောက်သည်အသစ်များဝယ်ယူခြင်း၊ လက်ရှိဖောက်သည်များအားရောင်းအားတက်ခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေတိုးပွားရန်ရည်မှန်းချက်များပါ ၀ င်သည်။
LAARC - နားထောင်၊ အသိအမှတ်ပြု၊ အကဲဖြတ်၊ တုန့်ပြန်၊ အတည်ပြုပါအရောင်းအ ၀ င်မှာမကောင်းတဲ့တုန့်ပြန်ချက် (သို့) ကန့်ကွက်မှုတွေကြုံရတဲ့အခါအရောင်းနည်းလမ်းတစ်ခု။
LAIR - နားထောင်၊ အသိအမှတ်ပြု၊ဖြေ။ ။ ရောင်းတဲ့အတိုကောက်နောက်တစ်ခု။ ဒီတစ်ခုကအရောင်းအ ၀ င်ကနေကန့်ကွက်မှုကိုတန်ပြန်ဖို့အသုံးပြုသည်။ ဦး စွာသူတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုနားထောင်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်၏နားလည်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သူတို့ကိုပြန်ပဲ့တင်ထပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်မပြန်ခြင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကိုဖေါ်ထုတ်ပါ။
LAT - ကန့်သတ်ကြော်ငြာခြေရာခံဖြေ - သုံးစွဲသူများကိုကြော်ငြာသူများအတွက် IDFA (IDFA) ကိုငြင်းပယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မိုဘိုင်း application feature ။ ဤချိန်ညှိချက်ကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသူ၏ IDFA သည်ကွက်လပ်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ယက်များမြင်ရသည့်အတိုင်းကိရိယာတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိသောကြောင့်သုံးစွဲသူသည်၎င်းတို့အတွက်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
LCP - အကြီးမားဆုံးပါဝင်သောအရောင်သုတ်ဆေးGoogle ၏အသုံးပြုသူစာမျက်နှာအတွေ့အကြုံနှင့်တိုင်းတာမှုစွမ်းဆောင်ရည် (စာမျက်နှာအမြန်နှုန်း) ကိုတိုင်းတာမှု၌၎င်း၊ အဓိက Web Vitals.
LSTM - ကာလတိုမှတ်ဉာဏ်: မှုများထပ်တလဲလဲအာရုံကြောကွန်ယက်တစ်ခုမူကွဲ။ LSTM များ၏အားသာချက်မှာသတင်းအချက်အလက်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမှတ်မိနိုင်ပြီး၎င်းကိုလက်ရှိအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အိမ်ဖော် - မိုဘိုင်းကြော်ငြာ ID or မိုဘိုင်းကြော်ငြာ IDအသုံးပြုသူအတွက်သီးသန့်ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သောအမည်မသိအမှတ်အသားဖော်ပြချက် - အသုံးပြုသူ၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး၎င်းတို့၏မိုဘိုင်း operating system ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ developer များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏ app ကိုမည်သူအသုံးပြုနေသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် MAIDs ကကူညီသည်။
မြေပုံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် High-touch၊ ကိုယ်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောဖြစ်စဉ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားအလားအလာများပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးသောနည်းပညာတစ်ခု။ Salesforce Marketing Cloud နှင့် Marketo သည် MAP များ၏ဥပမာများဖြစ်သည်။
MDM - မာစတာဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု: ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာစနစ်များမှဖောက်သည်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့်အခြားစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်တူညီသောအချက်အလက်များကိုဖန်တီးသောလုပ်ငန်းစဉ်။
ML - Mသင်ယူ Achine: AI နှင့် ML ကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း၎င်းစကားစုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်များရှိသည်။
MMS - မာလ်တီမီဒီယာစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု: ရုပ်သံ၊ အသံ၊ ဖုန်းအဆက်အသွယ်များနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်များအပါအဝင် SMS သုံးစွဲသူများအားမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများပေးပို့ခွင့်ပြုသည်။
MNIST - ပြုပြင်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် MNIST ဒေတာဘေ့စ်သည်စက်သင်ကြားမှုတွင်အကျော်ကြားဆုံးအခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
MoM - လ - ကျော် - လဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြတဲ့အပြောင်းအလဲများ။ MoM သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးလတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုင်းတာမှုများထက်ပိုမိုမတည်ငြိမ်မှုရှိသည် အားလပ်ရက်တွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ၊
MPP - မေးလ်လုံခြုံရေးကာကွယ်မှု- Apple ၏နည်းပညာသည်စားသုံးသူများ၏အီးမေးလ်ဖွင့်ခြင်းကိုခြေရာခံ။ မရသောကြောင့် open email (pixel request) ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များမှဖယ်ရှားသည်။
MQA - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်အကောင့်: အ ABM စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မီသောခဲနှင့်ညီမျှသည်။ MQL သည်အရောင်းသို့ကူးပြောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းအမှတ်အသားပြုသကဲ့သို့ MQA သည်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်ကိုပြသပြီးအရောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်။
MQL - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မီသောဖြေ။ ။ သင်၏ကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသင်၏ပူဇော်သက္ကာများကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားကြောင်း ၀ ယ်ယူသူဖြစ်လာနိုင်သည့်ညွှန်ပြသူမည်သူမဆိုသည် MQL ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၄ င်းကိုအပေါ်ပိုင်း (သို့) အလယ်၌တွေ့နိုင်သည်။ MQLs ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်းအားနှစ်ခုစလုံးမှဖောက်သည်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
MQM - စျေးကွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအစည်းအဝေးများ: MQMs ဆိုသည်မှာသင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်များနှင့် virtual ဖြစ်ရပ်များအားလုံးအတွက် virtual CTA (သတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်မှု) အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာ - ရောနှောထားသော Reality: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရာဝတ္ထုများအတူတကွတည်ရှိပြီးအချိန်နှင့်အမျှအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များနှင့်မြင်ကွင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အစစ်အမှန်နှင့် virtual ကမ္ဘာများ၏ပေါင်းစည်းမှု။
MRM - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု: ၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို orchestrate, တိုင်းတာနှင့်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသော platform များ။ ၎င်းတွင်လူသားနှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များပါ ၀ င်သည်။
MRR - လစဉ်ထပ်တလဲလဲအခွန်: စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောမျှော်မှန်းထားသည့်ဝင်ငွေကိုတိုင်းတာသည်။
လှစ်ထား - multi-factor authentication- သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်တို့ထက်ကျော်။ အွန်လိုင်းအကောင့်များ၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုသောအကာအကွယ်အပိုတစ်ခု။ အသုံးပြုသူသည်စကားဝှက်ကိုဖြည့်သွင်းပြီးနောက်တွင်ထပ်မံစစ်ဆေးမှုများထပ်မံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ အီးမေးလ် (သို့) authentication application တစ်ခုမှတဆင့်ပေးပို့သောကုဒ်ကိုတုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။
NER - Entity အသိအမှတ်ပြု Named: NLP မော်ဒယ်များအတွက်အရေးပါသောဖြစ်စဉ်ကို။ အမည်ခံအဖွဲ့အစည်းများသည်များသောအားဖြင့်လူများ၊ နေရာများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ - စာသားအတွင်းရှိသင့်လျော်သောအမည်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
NFC - Field Communication အနီးတွင်ရှိသည်- ၄ စင်တီမီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအကွာအဝေးရှိအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းနှစ်ခုအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ရေး protocol များ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများကို bootstrap လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းနိမ့်သောဆက်သွယ်မှုကို NFC ကကမ်းလှမ်းသည်။
NLP- Natural ဘာသာစကားထုတ်ယူခြင်း: စက်သင်ယူမှုအတွင်းရှိသဘာဝလူ့ဘာသာစကားကိုလေ့လာခြင်း၊ ထိုဘာသာစကားကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်သည့်စနစ်များဖန်တီးခြင်း။
NLU - သဘာဝဘာသာစကားနားလည်မှု။ သဘာဝဘာသာစကားနားလည်မှုဆိုသည်မှာ NLP ကို ​​အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သောဘာသာစကား၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတုဥာဏ်ဖြင့်မည်ကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်မည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။
NPS - Net က Promoter ရမှတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အတူဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအတွက်မက်ထရစ်။ Net က Promoter ရမှတ် သင်၏ဖောက်သည်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြားသူများအားအကြံပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုင်းတာသည်။0- 10 အတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းတာ။ သုညသည်အနည်းဆုံးအကြံပြုသင့်သည်။
NRR - အသားတင်ထပ်တလဲလဲအခွန်- သင်၏အရောင်းစနစ်သို့အသစ်ဝယ်ယူထားသောအကောင့်များ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေနှင့်လက်ရှိငွေစာရင်းများသို့လစဉ်ထပ်တိုး ၀ င်ငွေ၊ တူညီသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပိတ်ထားသော (သို့) လျှော့ချထားသောစာရင်းများမှရရှိသော ၀ င်ငွေ၊
OCR - အိုptical ဇာတ်ကောင်အသိအမှတ်ပြုမှု: စာဖြင့်ရေးသားသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ဇာတ်ကောင်ဖော်ထုတ်၏ဖြစ်စဉ်ကို။
အိုး - အိမ်အပြင်ပြင်ပမီဒီယာဟုလည်းလူသိများသော OOH ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ပြင်ပကြော်ငြာသည်၎င်းတို့အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ရှိနေစဉ်သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိသည့်ကြော်ငြာဖြစ်သည်။
OTT - Over-The-Topကြည့်ရှုသူများကိုအွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းသည့် streaming media service ။ OTT သည်ကေဘယ်၊ ရုပ်သံနှင့်ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားပလက်ဖောင်းများကိုရှောင်ကွင်းသည်။
PDF - အိတ်ဆောင်မှတ်တမ်းဖိုင်: PDF ဆိုတာ Adobe ကတီထွင်ထားတဲ့ cross-platform ဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ PDF သည် Adobe Acrobat ကို သုံး၍ ဖိုင်များပြုပြင်ခြင်းအတွက်မူလဖိုင်ပုံစံဖြစ်သည်။ မည်သည့်လျှောက်လွှာမှမဆိုစာရွက်စာတမ်းများကို PDF သို့ပြောင်းနိုင်သည်။
PPC - ကလစ်နှိပ်ပါ Per ပေးဆောင်ဖြေ - အရေးယူမှုတစ်ခုစီအတွက်ကြော်ငြာရှင်တွေကိုအားပေးတဲ့ကြေညာသူတစ် ဦး ကသူတို့ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ CPC ကိုလည်းကြည့်ပါ။
PFE - Probabilistic မျက်နှာ Embeddings: ကန့်သတ် settings ကိုအတွက်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုတာဝန်များကိုများအတွက်နည်းလမ်း။
PII - ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး: စုဆောင်းထားသောသို့မဟုတ်ဝယ်ယူထားသောဒေတာအတွက်ယူအက်စ်အခြေပြုအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားဒေတာများနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
PIM - ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးကွက်နှင့်ရောင်းချရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ၏ဗဟိုအစုတစ်ခုသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ပုံနှိပ်ကတ်တလောက်များ၊ ERP စနစ်များ၊ PLM စနစ်များနှင့်ကုန်သွယ်ဖက်များသို့အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်ပေးပို့မှုများကဲ့သို့သတင်းများကိုမျှဝေရန်နှင့်လက်ခံရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
PLM - ကုန်ပစ္စည်း Lifecycle စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းအထိထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
PM - စီမံကိန်းမန်နေဂျာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်အချိန်ဇယားများရရှိရန်အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစတင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း၊
PMO - စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ထိန်းသိမ်းသောအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိဌာနတစ်ခု။
PMP - စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်: သည်နိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန Institute (PMI) ။
PQL - ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်းပြည့်မီသော: SaaS ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ် Freemium မော်ဒယ်မှတဆင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောတန်ဖိုးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းမွေးစားခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသောအလားအလာဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာအဆင့်: Page rank ကိုဂူဂဲလ်မှအသုံးပြုသော algorithm တစ်ခုမှဆုံးဖြတ်ပြီး website တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားသောလျှို့ဝှက်သတ်မှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ဂဏန်းအလေးချိန်ကိုပေးသည်။ အသုံးပြုသောစကေး0- 10 ဖြစ်ပြီးဤနံပါတ်ကိုအဝင်ဝအဆက်အစရှိသောအချက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၏စာမျက်နှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာကိုပိုမိုမြင့်မားလေ၊ သင်၏သက်ဆိုင်ရာ site နှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုရှိရန် Google ကစဉ်းစားသည်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဖြေ - PR ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုလွတ်လပ်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအသစ်အဆန်း။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတိုက်ရိုက်ရောင်းရန်နည်းဗျူဟာမဟုတ်သောနည်းဖြင့်သင့်စီးပွားရေးကိုတင်ပြသည်။
PRM - မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရောင်းချသူများအနေဖြင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံရန်ကူညီသည့်နည်းစနစ်များ၊ နည်းဗျူဟာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများ။
PSI - PageSpeed ​​Insights: အဆိုပါ Google က PageSpeed ​​Insights ရမှတ်သည်0မှ 100 မှတ်အထိရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်ပိုကောင်းသည်နှင့် 85 သို့မဟုတ်အထက်ရမှတ်စာမျက်နှာကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
QOE - အတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေး: အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအတွေ့အကြုံသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်အတူဖောက်သည်၏အတွေ့အကြုံများကိုမွေ့လျော်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုအတွက်အထူး QoE ၏အရည်အသွေးကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယို အသုံးပြုသူစက်သို့လွှင့်ထုတ်သည်, နှင့် အဆိုပါပြသသည့်အခါပြန်ဖွင့်များ၏အရည်အသွေး ဗီဒီယို အသုံးပြုသူစက်ပေါ်တွင်။
QoS - ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေး:
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု - QoS သည်သင်၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အကောင့်အဖွဲ့များသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ပေးနေသောပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု - QoS သည်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး စားပေးအစီအစဉ်များ၊ သုံးစွဲသူများသို့ဒေတာစီးဆင်းမှုများ (သို့) စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အချို့ကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
REGEX - ပုံမှန်ဖော်ပြမှုစာသားနှင့်ကိုက်ညီရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်စာသားအတွင်းရှိစာလုံးပုံစံကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းလမ်း။ ခေတ်သစ်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအားလုံးသည်ပုံမှန်ဖော်ပြချက်များကိုထောက်ခံသည်။
REST - ကိုယ်စားပြုပြည်နယ်လွှဲပြောင်း- HTTP မှတဆင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဖြန့်ဝေထားသောစနစ်များအတွက် API ဒီဇိုင်း၏ဗိသုကာပုံစံ။
RFID - ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းမှတ်ပုံတင်အရာဝတ္ထုများနှင့်သက်ဆိုင်သော tags များကိုအလိုအလျောက်သိရှိနိုင်ပြီးခြေရာခံရန်လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်များကိုအသုံးပြုသည်။ RFID စနစ်တွင်သေးငယ်သောရေဒီယို transponder၊ ရေဒီယိုလက်ခံခြင်းနှင့် transmitter တို့ပါဝင်သည်။
RFP - အဆိုပြုချက်အဘို့တောင်းဆိုခြင်းဖြေ - ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုယ်စားပြုမှုကိုရှာနေရင်သူတို့က RFP ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည် RFP တွင်ဖော်ပြထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကို အခြေခံ၍ အဆိုပြုလွှာတစ်ခုကို ပြင်ဆင်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်ထံသို့တင်ပြပါလိမ့်မည်။
RGB - အနီေရာင်, စိမ်းလန်းသော, ပြာသော: အဖြူ၊ အစိမ်းနှင့်အပြာရောင်တို့ကိုကျယ်ပြန့်သောအရောင်များကိုမျိုးပွားစေရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အတူတကွထည့်သွင်းထားသောအရောင်ဖြည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ပုံစံ၏အမည်သည်အပို၊ အရောင်သုံးရောင်၊ အနီ၊ အစိမ်းနှင့်အပြာတို့၏မူလအတိုကောက်မှဆင်းသက်လာသည်။
RMN - လက်လီမီဒီယာကွန်ယက်: လက်လီရောင်းချသူများ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြော်ငြာပလက်ဖောင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလက်လီရောင်းသူများ၏ to ည့်သည်များအားကြော်ငြာရန်ခွင့်ပြုသည်။
RNN - R ကိုecurrent အာရုံကြောကွန်ယက်: ကွင်းများရှိသည့်အာရုံကြောကွန်ယက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ယခင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်စနစ်အားသတင်းအချက်အလက်အသစ်အားမည်သို့အနက်ဖွင့်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
ROAS - Ad Spend သို့ပြန်သွားသည်: သုံးစွဲသောဒေါ်လာတစ်လုံးစီမှရရှိသော ၀ င်ငွေကိုတိုင်းတာ။ ကြော်ငြာခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်။
ရွယ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်သွား: စာရင်းကိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရောင်းအတိုကောက်နောက်တစ်ခုမှာအမြတ်အစွန်းကိုတိုင်းတာ။ ROI = (ဝင်ငွေ - ကုန်ကျစရိတ်) / ကုန်ကျစရိတ်ကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလားအလာသည်ရှေ့ပြေးနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုများကိုဆက်လက်ရပ်တန့်သင့်သလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် ROI ကကူညီနိုင်သည်။
ရိုမီ - Marketing ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါဤသည်မှာအမြတ်အစွန်းကိုတိုင်းတာ။ တွက်ချက်တွက်ချက်ထားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာမက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သည်ရှေ့ပြေးနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကုန်ကျစရိတ်များလား၊ အားထုတ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် (သို့) ရပ်တန့်သင့်မသင့်ကို ROMI ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
RPA - စက်ရုပ်လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက်: တင်စားထားတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲစက်ရုပ်များသို့မဟုတ်အတုထောက်လှမ်းရေး / ဒစ်ဂျစ်တယ်အလုပ်သမားများအပေါ်အခြေခံပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်နည်းပညာ။
RSS - အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသော SyndicationRSS ကိုအကြောင်းအရာစုစည်းခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းအတွက် XML markup သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သမားများနှင့်ကြေညာသူများကို ၄ င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက်ပေးပို့ခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ အသစ်သောအကြောင်းအရာများထုတ်ဝေသည့်အခါစာရင်းပေးသွင်းသူများသည်အလိုအလျောက်မွမ်းမံချက်များကိုလက်ခံရရှိသည်။
RTB - အချိန်နှင့်တပြေးညီလေလံခြင်းကြော်ငြာကြော်ငြာကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှုန်းထားဖြင့်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုသည်ရုတ်တရက်ပရိုဂရမ်မာလေလံမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
RTMP - အချိန်နှင့်တပြေးညီ Messaging Protocol၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Macromedia (Adobe) မှ TCP အခြေခံပရိုတိုကောလ်တစ်ခုအားအသံ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အင်တာနက်ဒေတာများထုတ်လွှင့်ရန်။
SaaS - တစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များSaaS ဆိုတာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတတိယပါတီကုမ္ပဏီတစ်ခုက Cloud ကိုသုံးသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုလွယ်ကူသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြုလုပ်ရန် SaaS ကိုမကြာခဏအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမိုးတိမ်ပေါ်တွင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပြီးဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်း၊ အရောင်းပြခန်းနှင့် Dropbox တို့ပါ ၀ င်သည်။
Sal - အရောင်း ဦး ဆောင်မှုကိုလက်ခံသည်ဖြေ - ဒါကတရားဝင်ရောင်းအားကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ MQL တခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးလိုက်စားရန်ထိုက်တန်သည်။ မည်သည့်အရည်အချင်းများနှင့် MQL သည် SAL ဖြစ်ရန်စံသတ်မှတ်ခြင်းကိုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကသူတို့အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုနောက်ဆက်တွဲသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်၊ မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
SDK - Software Developer Kit ပါ: developer များအနေဖြင့်ခေါင်းအစပြုရန်ကုမ္ပဏီများသည် developer ရေးသားနေသည့်ပရောဂျက်များတွင် class သို့မဟုတ်လိုအပ်သော function များကိုထည့်သွင်းရန် package တစ်ခုကိုမကြာခဏထုတ်ဝေလေ့ရှိသည်။
SDR - အရောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုယ်စားလှယ်စီးပွားရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုအသစ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
SEM - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ပုံမှန်အားဖြင့် pay-per-click (PPC) ကြော်ငြာအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။
SEO - Search Engine OptimizationSEO ဆိုသည်မှာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှအကြောင်းအရာများကို“ ရှာတွေ့ရန်” ကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်၊ Bing နှင့် Yahoo တို့ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ဆက်စပ်မှုရှိရန်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ အသုံးပြုခြင်း သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ နှင့်ရှည်သောအမြီးသော့ချက်စာလုံးများသူတို့ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်သောအခါ, ပိုမိုလွယ်ကူစွာတွေ့ရှိရဒါကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းရန်သူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ SEO ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပြီးအမှန်တကယ် algorithmic variable များကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ထားသောစီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။
SERP - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တခုခုမှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးတခု (သို့) ဝေါဟာရတခုကိုသင်ရှာဖွေတဲ့အခါသင်ရောက်တဲ့စာမျက်နှာ။ SERP သည်သော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်ဝေါဟာရအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
SFA - Salesforce အလိုအလျောက်အရောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောဆော့ဖ်ဝဲများအတွက်အရောင်းအတိုကောက်၊ အရောင်း၊ ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်မှုကိုခြေရာခံခြင်း၊
SKU - အစုရှယ်ယာထိန်းသိန်းရေးဌာန: ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားသောအမှတ်အသား။ SKU ကိုမကြာခဏဘားကုဒ်ဖြင့် encod လုပ်ပြီးရောင်းချသူများကစာရင်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုအလိုအလျောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုသည်။ SKU ကိုအက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှစ်လုံးနဲ့အထက်ပေါင်းစပ်ထားတယ်။
SLA - ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက် - SLA ဆိုသည်မှာ ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်နှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းတွင်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္defကိုသတ်မှတ်သည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ အရောင်းအဖွဲ့သည် ဦး ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့မည်ပုံလိုက်မည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
SM - လူမှုမီဒီယာဥပမာများတွင် Facebook၊ LinkedIn၊ Twitter၊ Instagram၊ Pinterest, Snapchat, TikTok နှင့် Youtube တို့ဖြစ်သည်။ SM ဆိုဒ်များသည်အသုံးပြုသူများကိုဗီဒီယိုနှင့်အသံအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာများတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းများကိုစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအော်ဂဲနစ်အသွားအလာသာမကကမကထပြုထားသောသို့မဟုတ်လစာပေးသောပို့စ်များကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။
SMART - တိကျသော၊ တိုင်းတာနိုင်သော၊ ရနိုင်သော၊ဖြေ - အတိုကောက်ကရည်မှန်းချက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတ်မှတ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ရန်နှင့်ချမှတ်ရန်ကူညီသည်။
SMB - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ- အမြတ်ငွေ ၅ မှ ၂၀၀ ကြားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြသည့်အတိုကောက်။ ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ (သို့) နည်းသော ၀ န်ထမ်းများ (အသေးစား) ရှိသော ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ မှ ၉၉၉ အထိ (အလယ်အလတ်) ရှိသောဖောက်သည်များကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စား - ဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူသင်၏ ၀ ယ်ယူသူဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောသီးခြားနယ်မြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှအခွင့်အာဏာ။ စျေးကွက်သမားများအတွက်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၊ အဓိကဖောက်သည်များ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များသည်များသောအားဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အရေးပါသောသွင်းအားစုများဖြစ်သည်။
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများကိုသင်၏အကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အလားအလာများကိုကြေငြာရန်၊ ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ရန်နှင့်သင်၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခွင့်အလမ်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများကိုနားထောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
SMM - လူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေ - အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွေကိုအသုံးချဖို့အသုံးချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စနစ်များ။
SMS - စာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှု: ၎င်းသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှစာသားကိုအခြေခံသည့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်ရှေးအကျဆုံးသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆပ်ပြာ - ရိုးရှင်းသော Object ကို Access ကို protocol ကိုSOAP သည်ကွန်ရက် ၀ န်ဆောင်မှုများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်စနစ်တကျသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းအတွက်စာတိုပေးပို့သည့် protocol သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်
လှည့်ဖျား - အခြေအနေ, ပြProbleနာ, ဆိုလို, လိုအပ်ပါတယ်ဖြေ - အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခု“ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်း” နည်းလမ်း။ အလားအလာရှိသောအကျိုးဆက်များကိုတိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အလားအလာ၏နာကျင်မှုအချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းတို့ကို“ နာကျင်စေ” သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ "ကယ်ဆယ်ရေး" ထံသို့လာကြ၏
အရောင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသောခဲဖြေ - SQL ဆိုတာဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ဦး ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဦး ဆောင်မှုတခုဖြစ်တယ်။ အရောင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ SQL များကိုယေဘုယျအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရောင်းအားနှစ်ခုစလုံးမှစစ်ဆေးသည်။
စနစ်တကျမေးမြန်းချက်ဘာသာစကားများrelational database management system တွင်သိုမဟုတ် data relational data stream management system တွင် data ကိုစီမံရန်အတွက်ပရိုဂရမ်တွင်အသုံးပြုသည်။
SRP - လူမှုဆက်ဆံရေးပလက်ဖောင်း: ဆိုရှယ်မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအကြောင်းအရာများကိုကုမ္ပဏီများအားစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း၊
SSL - Sockets Layer Secure: cryptographic protocols များသည်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်ခုမှဆက်သွယ်မှုလုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
SSP - ထောက်ပံ့ရေးဘေးထွက်ပလက်ဖောင်း: ကြေညာသူတွေကိုကြော်ငြာဈေးကွက်ကိုစာရင်းပေးသွင်းနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုကသူတို့ site မှာကြော်ငြာနေရာရောင်းလို့ရတယ်။ SSP များသည် DSP များနှင့်မကြာခဏပေါင်းသင်းပြီးသူတို့၏ဝင်ငွေကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးကြော်ငြာဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
STP - အပိုင်း, ပစ်မှတ်ထား, ရာထူး: စျေးကွက်၏ STP ပုံစံသည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာထိရောက်မှု၊ စီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထို့နောက်ကဏ္ each တစ်ခုချင်းစီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရောနှောခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်နေရာချထားခြင်းမဟာဗျူဟာကိုဖော်ထုတ်သည်။
တမ် - နည်းပညာဆိုင်ရာအကောင့်မန်နေဂျာ: အောင်မြင်သောနေရာချထားမှုအတွက်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက် IT အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အထူးပြုထုတ်ကုန်ကျွမ်းကျင်သူ။
TLD - ထိပ်တန်းဒိုမိန်း: root ဒိုမိန်းပြီးနောက်အင်တာနက်၏အဆင့်ဆင့်ဒိုမိန်းအမည်စနစ်၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရှိဒိုမိန်း။ www.google.com ဥပမာအားဖြင့် -
google = ဒိုမိန်း
com = ထိပ်ဆုံးဒိုမိန်း
TTFB - ပထမ ဦး ဆုံး Byte ဖို့အချိန်: အသုံးပြုသူသို့မဟုတ် client မှ HTTP တောင်းခံမှုပြုလုပ်သောသုံးစွဲသူသို့မဟုတ် browser မှကြာရှည်စွာတိုင်းတာသော ၀ က်ဘ်ဆာဗာသို့မဟုတ်ကွန်ယက်အရင်းအမြစ်၏တုံ့ပြန်မှုကိုညွှန်ပြမှုသည်သုံးစွဲသူ၏ browser (သို့) ကုဒ်နံပါတ်မှလက်ခံသောစာမျက်နှာ၏ပထမဆုံး byte သို့ API ကို).
UCaaS - ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေး: Cloud-based အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်မျိုးစုံဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။
UGC - အသုံးပြုသူဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာ: UGC ဟုလည်းလူသိများသောအကြောင်းအရာများဟုလူသိများသည်၊ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများမှတင်ထားသောပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ စာသားများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အသံများကဲ့သို့သောမည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည်။
UGC - အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာ: အသုံးပြုသူဖန်တီးသည့်အကြောင်းအရာ (UCC) ဟုလည်းလူသိများသည်၊ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများမှတင်ထားသောပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ စာသားများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အသံကဲ့သို့သောမည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည်။
UI - User Interfaceအသုံးပြုသူကချိတ်ဆက်ထားတဲ့တကယ့်ဒီဇိုင်း။
URL - ယူနီဖောင်းအရင်းအမြစ်တည်နေရာ: ကွန်ရက်လိပ်စာဟုလည်းလူသိများသောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၏တည်နေရာနှင့်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ယန္တရားကိုသတ်မှတ်ထားသောဝဘ်ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
USP - ထူးခြားတဲ့ရောင်းအားစီမံခ: ဒါ့အပြင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများ ထူးခြားတဲ့အရောင်းရဆုံးအချက်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့ပြောင်းလဲရန်ဖောက်သည်များအားထူးခြားသောအဆိုပြုချက်များပြုလုပ်ရန်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။
UTM - Urchin ခြေရာခံခြင်း module: အသွားအလာရင်းမြစ်များတလျှောက်အွန်လိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုခြေရာခံရန်စျေးကွက်များမှအသုံးပြုသော URL သတ်မှတ်ချက် ၅ မျိုး။ ၎င်းတို့ကို Google Analytics ၏ယခင် Urchin မှမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Google Analytics မှထောက်ပံ့သည်။
UX - အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံဖြေ - ၀ ယ်ယူသူဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး။ ၀ ယ်သူ၏အတွေ့အကြုံသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ဝယ်ယူသူ၏ထင်မြင်ချက်အပေါ်လွှမ်းမိုးသည် အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံသည်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးလက်ရှိဖောက်သည်များအားသစ္စာစောင့်သိစေသည်။
သင်တို့သည် - ဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း AI နှင့်စက်သင်ယူခြင်းကိုသုံးသောပလက်ဖောင်းများသည်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများအတွင်းအဓိကအခိုက်အတန့်များကိုလျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုစုစည်းရန်၊ ရှာဖွေရန်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်၊ လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုရှိစေသည်။
VOD - ဝယ်ယူမှုတွင်ဗီဒီယို- သုံးစွဲသူများအားရိုးရှင်းသောဗွီဒီယိုဖျော်ဖြေရေးကိရိယာမပါဘဲနှင့်ငြိမ်သောအသံလွှင့်အစီအစဉ်ဇယား၏ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲဗီဒီယိုဖျော်ဖြေရေးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်မီဒီယာဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။
VPAT - မိမိဆန္ဒအလျောက်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုနိုင်မှုပုံစံ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စစ်ဆေးမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပြီးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပုဒ်မ ၅၀၈ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုစံနှုန်းများ၊ WCAG လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်မည်မျှကိုက်ညီသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
VR - virtual Reality: အထူးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောသုံးဖက်မြင်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုအားကွန်ပျူတာမှထုတ်လုပ်သည့်ပုံရိပ်ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်သံခမောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်လက်အိတ်များ။
WCAG - ဝဘ်ဆိုက်ပါဝင်မှုသုံးစွဲနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ - နိုင်ငံတကာတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပါဝင်မှုကိုရရှိစေရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောစံသတ်မှတ်ချက်ကိုပေးရမည်။
WWW - အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ: အများအားဖြင့် Web ဟုလူသိများသည်၊ Hypertext ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သော Uniform Resource Locators မှစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြား web အရင်းအမြစ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်စနစ်ဖြစ်သည်။
XML - eXtensible Markup ဘာသာစကား: XML ဆိုသည်မှာ data ကိုလူ့ဖတ်နိုင်သောစက်များနှင့်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် encode လုပ်ရန်အသုံးပြုသော markup language တစ်ခုဖြစ်သည်။